Christian Eriksen oo doortay koox ka ciyaarta horyaalka Premier League kadib markii uu waayay Real Madrid. – Gool FM
(England) 23 June 2019. Kubad sameeyaha kooxda Tottenham Hotspur Christian Eriksen ayaa doortay inuu ku biiro koox ka ciyaarta Premier League kadib markii ay burburtay rajadii uu kalahaa inuu u ciyaaro Real Madrid.
Xiddigaan reer Den mark ayaa go’aansaday inuu isaga guuro kooxdiisa kadib markii ay ku fashilmeen iney hantaan koobka UEFA Champions League, wuxuuna doonayay inuu u guuro La Liga maadaama Los Blancos ay tahay koox uu waligiis jeclaa u ciyaaristeeda.
Zinedine Zidane ayaa kala cadeeyay dooqiisa khadka dhexe ee xagaagan, wuxuuna doortay Paul Pogba taasoo ka dhigan in Eriksen uusan fursad u heli karin ka ciyaarista Santiago Bernabeu.
Spurs waxey 27-jirkaan ku dooneysaa 100 Malyan oo Pound, isagana hadda wuxuu doortay inuu u wareego Man United oo raadineysa xiddig kubadda u sameeya maadaama aysan hubin mustaqbalka Paul Pogba oo sidoo kale lala xiriirinayo dib ugu laabashada Juventus.
Si kastaba Eriksen dhawaan ayuu ka dhawaajiyay inuu doonayo meel cusub inuu ka ciyaaro, sidoo kalana uu ku faraxsan yahay wax walba oo Spurs uu ku sameeyay.